Manni Maree Uummataa Uummata Irratti Waraana Hin Labsu! – Ayyaantuu
HomeAfaan OromooManni Maree Uummataa Uummata Irratti Waraana Hin Labsu!
Abebe Mekonen! You gave your life for your people and for your country. You are always in our heart. Rest in Peace, Abbee
Damee Boruutin, Gurraandhala 27, 2018
Miseensi mana maree afaan uummataa tahee uummatee isa ergateef hojjeta. Rakkinni fi dhibeen uummataa yaroon akka hiikamuuf garaara. Uummata isa filatee tajaajila mootummaa akka kan fayyaa eegumsa, barnootaa, karaa wal quunnamtii fi guddina hormaataa akka qabaatu uummata isa ergateef hojjeta. Haa tahu malee biyyaa akka Impayeera Itophiyaatti manni maree uummataa qaama mootummaa tahee waan mootummaan barbaadu ragaasisuu dha hojiin isaa. Kanas waan godhaniif sababa adda addaatu jira. Inni duraa ofuma isaanii iyyuu mootummaan kun waan barbaadu yoo hojjechuu didan akka nagaa isaan dhowwatu waan beekaniif soda irraa kan ka’u dha. Karaa biraa ayyaan- ilaalatummaan qabamanii waa’ee uummataa dagatanii jireenya miidhagaa jiraachuuf jecha hojii mootummaa hojjechuuf filatu.
Yaroo amma keessa jirru kana seeraan ala TPLF yaroo lamaffaaf Labsi Hattattamaa uummataa nagaa jiraatu irraatti labsaa jirti. Haalli labsi hattattamaa baraachisuu biyyaa hin jirree keessatti labsii hattattaa labsuun uummata irratti waraana labsuu akka tahe biyyi lafaa hubachaa jiraa. Fuula durattis dura dhaabbachaa jira. Uummatni keenya illee Bahaa amma dhihaa Kabaa amma Kibaa waraana seeraa alatti labsame kana kallattiin dura dhaabatee jira. TPLF garuu waan seeraan deemaa jiru fakkeessuuf akka barte manni maree uummtaa akka ragaasisuuf afuufaa jirtu ni agarra.
Akka TPLF hawwitu tahee yoo manni maree uummataa labsii kana ragaasiseef uummatni keenya waraanaa kan irratti labse mana maree akka tahee itti fudhachuuf dirqama. Warra kana irraa bakka bu’uummaa uummataa kennameef irraa molqee akka qaama diinatti tuhachuu qaba. Kan waraana uummata irratti labsame kana gaggeessus tahe kan waraana kana gargaaruu uummataa du’aa jiruu biratti garagarummaa hin qabu.
Uummatni keenya waan bareechee hubachuu qabu OPDOn qaama Mootummaa EPRDF akka taate dha. Yoo OPDOn hin jiraanne EPRDF hin jiru. Yoo EPRDF hin jiraannee TPLF hin jirtu. TPLF warraa ergamtoota ishee Kanaan dhima baatee uummata keenya waggaa 27 dhidhiite. Bara kana hoogantota OPDO kan tahan tokko tokko afaan uummata isaanii haa dubatan malee qaama mootummaa EPRDF waan tahniif waraana uummata keenya irratti labsaa jiruufis qaama akka tahan dagachuu hin qabnu. Labsii kana Oromiyaa keessatti kan hojii irra olshu qabu OPDO dha. Labsii kana hojii irraa olshuu dhiisuuf OPDOn mootummaa EPRDF keessaa bahuu qabdi. Kun tasa waan tahu natti hin fakkaatu. OPDO mootummaa EPRDF keessaa baasuuf Uummatni Oromoo mootummaa EPRDF kan TPLFiin hooggannamu cabsuu qaba.
Miseensonni mana maree uummataa prime minister TPLF isaanii dhiyeessitu yoo ragaasisaniif rakkina hin qabu. Nama tokko jijjiruun haala qabatamaa biyya sana keessa jiru irratti homaa tokko illee gargarummaa hin uumu. Akka warri OPDO diaspora hawwaa jiran yoo tahe Obbo Lammaa Magrsaa ykn Dr. Abiyi Ahmad prime minister yoo tahan dhiiga uummata Oromoo dhangala’aa jiruu dhaabuu hin danda’u. Mee caalaa iyyuu akka dhangala’uu hin godhiin. Kan barbaadde gochuuf aangoo kan qabu TPLF malee nama prime minister tahu akka hin taane namni hin beekne jira natti hin fakkaatu. Gegeessitoonni OPDO waggaa 27 darban waan uummata Oromoo tajaajilaa ture godhanii dhiyeessuu yaadu. Uummatni Oromoo garuu TPLF qabeenya Oromoo saamuu ,uummatni ajjeessamuu fi dararamuuf kan meeshaa taheef OPDO akka tahetti hubata.
Inni darbe darbee jira. Isa darbe seenaaf dhiifna. Kaleessas , har’as tahe boruu diinni Uummata Oromoo cabsuu kan danda’u ilmaan Oromoo meeshaa godhatee akka tahe sirritti hubachuu qabna. Namonni akka Obbo Lammaa Magarsaa warri afaan uummataa dubbatanii fi rakkinaa uummataa hubatan utuu hojiin uummata isaanii wajjin dhaabbatanii gargarumaa fiduun ni mala. Yoo obbo Lammaan kan afaaniin dubbatu hojii irra kan olshu tahe Leenca Oromoo tahuu kan isa dhowwu hin jiru. Yoo hojiin hin argamne garuue hantuuta gogaa leencaa ufatee dubbatu irraa adda hin tahu.
Diinonnii Uummata Oromoo injifatamuu isaanii dhoksachuuf marchaa jiru. Labsiin hattattamaa kan barbaachisuu uummata sodaachisuuf. Uummatni Oromoo akka bilisa tahee fi diina injifate kan mirkanneefate gaafa soda moo’ate sana. Baatii Sadaasa 2014 kaasee uummatni Oromoo sodaa akka injifatee jiru arguu dadhabuun diinaa tabjaa’uu dha. Shira addaa xaxxuunis waan dhimaa baasuuf dideef dhamaa jiru malee Uummata Oromoo sii achi jilbeefachiisu akka hin daneenye bareechanii beeku.
Of tulummaan kan of dhiibaa jirtu TPLF meeshaa waraanaa amma tokko waan qabduuf lubbuu xiqqoo dheerafachuuf uummata irratti waraanaa labsuu filatti. Warri ayyaan –ilallattoonnis ishee fakkaatanii lama buluuf jecha hammenya isheen hojjetu keessaa qooda fudhatu. Gaafa TPLF baddu wajjin boola galuuf akka of qopheessaa jiranis dagachuu hin qaban. Warri miseensa TPLF hin taane kan akka Abbaa Dulaa Gammadaa, Abdi illee, Siraaji Fageessa, Damaqee Mokoonon maafiyaa TPLF irraa adda bahanii ilaalamuu hin qaban. Ayyaanni isaanii kan TPLF irraa adda hin tahu. Yaroo hundaa yoo TPLf abaarruu warra dhiiga uummataan harka dhiqatee jiru kana irranfachuu keenya akka hin taane hubatamuu qaba.
Fincila uummata meeshaa waraana guddaa qabaachuun dhaamsuu ni danda’a utuu tahee mootummaan Soviet Union kan nukuleera biyyaa lafaa yaroo gabaabduu keessatti balleeessu danda’u qabu harka uummataatti caccabee biyya kudha shan hin tahu ture. Irree uummataa meeshaa fi waraanni kamuu cabsuu yoom akka hin jirree TPLF f galuu qaba. Uummata Oromoo qofa utuu hin taane uummata Impayeera Itophiyaa keessa jiru mara biratti TPLF xireefatamtee jirti.Namni TPLF itti dhagaa hin darbannee yoo jiraate ergamtoota ishee warra ishee wajjiin uummata saamee baduuf qophaa’ee qofa. Warri yakkamoonni kun ishee gargaaruu hafee lubbuu isaanii iyyuu baraarefachaa hin jiran.
Manni maree uummata Labsii Hattattamaa Lammaffaa kana TPLFf yoo ragaasisanis Fincila Xumura Garbummaa Qeerroon Bilisummaa Oromoon bubbisaa jiru dhaabuu hin danda’an. Dhiiga uummata baayyee dhangalaasuuf garuu sababa tahuun ni mala. Akka namaatis seenaa gurraachaa fudhatanii darbuu irraa uummata isaan filate wajjin dhaabbatanii didaa agrsiisanii seenaa boonsa yoo qabaatan hawwii koo ti. Biyya lafaa kana irratti waan barbaadan yoo godhan TPLF kufaatii jalaa hambsuu waan hin dandeenyeef uummata wajjin dhaabbachuun yaada eebisamaa dha.